သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကွဲပြားခြားနားသော operating system မြားပျေါတှငျအခွခေံမိုဘိုင်းဖုန်းများရှိပါတယ်။
လူကြိုက်အများဆုံးမှာ Android နှင့် iOS ဖြစ်သည်။ သင်၏စမတ်ဖုန်းတွင်ဂိမ်းအသစ်များတပ်ဆင်ရန်အခမဲ့နှင့်ငွေပေးချေသည့်အပလီကေးရှင်းများနှင့်ဂိမ်းများရရှိနိုင်သည့်ဤ OS များ၏အထူးစတိုးဆိုင်များသို့သွားရန်လိုအပ်သည်။
ဒီမှာ Google Play စတိုး Android အတွက်။ ဒီမှာ Aytyuns iOS မှာအိုင်ဖုန်းသည်။
ကတူတစ်ဦးကဒီဂိမ်းကိုဖုန်းမချောင်းကိုအပေါ်ရေးသားဖို့လိုအပ်ပေသည်။ နှင့် software သုံးပြီးကဲ့သို့ဖုန်းဖြင့်ထောက်ပံ့
တစ်ဦးကလက်ဝဲဝါဒီတစ်ဦးချည်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ ဒါကအလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ 🙂
1 နည်းလမ်း။ ဆိုက်ကနေဒါမှမဟုတ် Play စတိုးမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်။ သင့်ရဲ့ဖုန်းကတဆင့် Internet ကို access, သင်ကဂိမ်းရွေးကောက်သဖြင့်, စာနယ်ဇင်းတင်ထားရန်။ installation ကိုအလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို၏အဘယ်သူမျှမကပိုမလိုအပ်ပါ။
2 နည်းလမ်း။ သငျသညျပြီးသားဂိမ်းတစ်ခုဖြန့်ဖြူးရှိပါကသင့်ဖုန်းကဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖိုင်မန်နေဂျာကို အသုံးပြု. ဂိမ်းထည့်သွင်းပါ။
3 နည်းလမ်း။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပါ။ ကေဘယ်လ်ကြိုးမှတဆင့်ကွန်ပျူတာရန်သင့်ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပါနှင့်အထူးအစီအစဉ်များ၏အကူအညီဖြင့်, သင့်ဖုန်းတွင်ဂိမ်းထည့်သွင်းပါ။
တချို့ကဂိမ်းဘလူးတုသ်မှတဆင့်ကူးစက်ပေမယ့်ယခုအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်နှင့်အတူနီးပါးတိုင်းမော်ဒယ်စမတ်ဖုန်းသင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာမှတ်ဉာဏ်ဖုန်းရှိသည်အတိုင်း, ဂိမ်းအမျိုးမျိုးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်သင်ဖွစျလာနိုငျမှတ်ပုံတင်အားဖြင့်စကားလုံးကစားစျေးကွက်နဲ့ဖိုင်တွဲရှိနေကြသည်
ထိုသို့လုပ်ဖို့အဆင်ပြေကြောင့်မဟုတ်ရင်သူကပဲမကစားစေခြင်းငှါ, ပြီးတော့ရိုးရှင်းစွာ drag and drop, သူတို့ရဲ့ဖုန်းကိုမော်ဒယ်ကရွေးချယ်ခြင်း, အင်တာနက်ကနေ download, ဂိမ်းအဖြစ်အဲဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်, ဒီဗီဒီယိုထဲမှာ)) .... တစ်ကြိမ်ထက်ကိုတွေ့မြင်ရန်အလွန်အသေးစိတ် သာ. ကောင်း၏ PC ကွန်ပျူတာကနေမိုဘိုင်းရန်။
သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါအရမ်းရိုးရှင်းတဲ့ prichm တစ်ဦးတည်းသာလမ်းဖွင့်ကိုငါသိ၏။ ငါထို့နောက်တယ်လီဖုန်းနှင့်အထူးမှတဆင့်ကွန်ပျူတာဖြင့်ချိတ်ဆက်ပါ, ငါသည်အသင့်ကွန်ပျူတာသို့ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ဂိမ်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်။ ငါ program ကို install လုပ်ပါ။
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာ Quote သေချာဖို့လိုအပ်ပါတယ်; uvidelquot; diskquot;;, ရေးသားဖို့တစ်ခုခုဖြစ်လိမ့်မည်သည့်အခြားကိရိယာနောက်ထပ် Quote အဖြစ်သောဖုန်းဖြစ်သည်။ ဤသည် Bluetooth မှတဆင့်ပြုသောအမှုများနှင့်များသောအားဖြင့်ဖုန်းကိုတွဲထားတဲ့ shnurochek, မှတစ်ဆင့်နိုင်ပါသည်။
သင်ဤသို့ပြုလုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်သင်၏ Quot အသစ်တွင်ရှိသော Drivequot၊ ကူးယူပါ
အမှန်မှာသင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ထိုအဂိမ်းများကို install မတိုင်မီ, ထို့နောက်သင်သည်သင်၏သိသင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ ဆဲလ်ဖုန်း ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိမ်းတွေအားလုံးကိုအခြေခံထားလို့ပါ ဂျာဗား.
ထိုအတည်ထောင်ရန်နိုင်ရန်အတွက် ဂျာဗားဂိမ်းထိုအခါပထမဦးဆုံးကဘလူးတုသ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကို USB အဖြစ် port ကိုကနေတဆင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်, အဲဒီနောက်အလိုရှိသောဂိမ်း menu ကို select လုပ်ပါက run ခြင်းကိုသင်တန်းရပါမည်။
သင်အလိုရှိသောဂိမ်းရွေးကောက်သဖြင့်, အရာအားလုံးသည်အလိုအလျောက်ဖြစ်ပျက်ဝန်ဆောင်မှု Play စ Market.Tam မှတဆင့်ဤသို့ပြုနိုင်ပါတယ်။
တဖန်သင်တို့ပထမဦးဆုံး PC ပေါ်မှာဂိမ်းဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်အဖြစ်ဖုန်းနှင့် ustanovit.Smotrite ၌မှီနှင့်ခြေလှမ်းအကြံပေးချက်များနေဖြင့်ခြေလှမ်းရဲ့နိုင်သည်
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ ustanovitskachat ဂိမ်းအဖြစ်
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်း Install တခါတရံတွင်ပြဿနာဖြစ်တယ်, ဒါငါကြီးမြတ်အသေးစိတ်အတွက်အမျိုးမျိုးသောလုပ်ရပ်များဖော်ပြသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ချင်အပါအဝင်နှင့် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာ java-ဂိမ်းများကို install :
မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာဂိမ်းကို install လုပ်နည်း
ဒီနေရာတွင်က Windows Phone ပေါ်မှာဂိမ်းကို install ဖို့ဘယ်လိုကရှင်းပြသည်ပေးသောအခြားဗီဒီယိုသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်ကိုထည့်သွင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်။ သငျသညျတခုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
21 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,498 စက္ကန့်ကျော် Generate ။